warbixintii ugu danbeysa COVID19 itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka warbixintii ugu danbeysa COVID19 itoobiya
warbixintii ugu danbeysay xanuunka saf marka ah ee COVID19 Ethiopia ee maanta halkan hoose kaga bogo warbixinta oo dhameys tiran
5 qof oo dheeri ah ayaa u dhintay # COVID19 iyada oo #Ethiopia ay wali aragto xaalad kale oo 24 saac ah iyada oo ay jiraan 190 qof oo laga helay cudurka fiiruska.
ogeysiin xogtii shaley: Tirada guud ee dadkii la soo sheegay warbixinta shalay ayaa dib loogu noqday 126 laga soo bilaabo 136 ka dib markii natiijooyinka shaybaarka 10 bukaan laga helay inay la socdaan baaritaannada.
Sidaa darteed tirada guud ee kiisaska la xaqiijiyay hada waa 2,336.
waxaana ka bogsadey 18 qof ayaa soo kabsaday, taas oo tirada guud ee soo kabashada noqotay 379.
Tirada bukaanka ku jira xaalad aad u xun ayaa sidoo kale weli ah 32, oo la mid ah tii shalay, laakiin ugu sarreeysa illaa iyo hadda.
Natiijooyinka 190 caabuqyada cusub waxay ka soo baxeen 4, 599, baaritaanno sheybaar, hoos uga yimid 4, 775 tijaabooyinka shaybaarka shalay
Ma jiro wax tilmaamo ah oo ku saabsan taariikhda safarka ee dibedda, ama la xiriir raadinta warbixinta maanta,
190 maanta lagua helay waa 135 waa rag halka 55 ay yihiin haween da’doodu u dhaxayso 1 ilaa 89 sano jir.
Dhamaan 190 waa #Ethiopians
dadkan laga helay ee 190 ka ah, 153 waxaa lagu aqoonsaday magaalada #AddisAbeba; 16 waxay ka yimaadeen #Oromia; 10 waxay ka yimaadeen #Amhara; 3 mid kastaa oo ka socda #Harari, #Somali, iyo #SNNPRS (wadarta 9), 2 waxay ka kala socdaan #Tigray gobal goboleed siday u kala horreeyaan.
Ethiopia ilaa iyo hadda waxay sameysay 152, 334 tijaabooyin shaybaar, waxayna leedahay 1,923 xaalado firfircoon ama bukaanno jooga xarumaha daaweynta / karantiimada kala duwan, oo ay kujirto Millennium Hall Hospital dib loogu soo celiyay.